အတတ်ပညာ China Pipe Repair Clamp Stainless Steel Multi-Function Tee Products ယိုစိမ့်မှု ပြုပြင်ရေး ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
1. အမည်- Multi-fuction Tee
2. မတူညီသော ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
3. Multi-fuction Reducing Tee၊ Band Repair Clamp Tee၊ Flexibe Reducing Tee
1၊ ပြုပြင်ခြင်း၏ အဓိကကြိုးအမျိုးအစားများမှာ သံပိုက်၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေပြွန်၊ PE၊ PVC၊ ဖန်စတီးပြွန် အစရှိသဖြင့် ပိုက်လိုင်းပေါက်ပြဲခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခံရခြင်းနှင့် အက်ကွဲပျက်စီးခြင်း အမျိုးမျိုးတို့ကို လျင်မြန်ပြီး စီးပွားရေးပြုပြင်မှုနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပစ္စည်းနှင့် အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
2၊ ဤထုတ်ကုန်တပ်ဆင်မှုအဆင်ပြေ၊ လျှင်မြန်သည်၊ လူတစ်ဦးတည်းသာလိုအပ်သည်၊ ဖဲကြိုးသည်အလွယ်တကူပြီးမြောက်နိုင်သည်၊ လုပ်သားအများအပြားမလိုအပ်တော့ပါ၊ လုံးဝရပ်တန့်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ပိုက်များ၏ဖိအားကိုအမြန်ပြုပြင်ရန်၊ မြို့ပတ်ရထားပတ်လမ်းကိုအစားထိုးပါ။ ပိုက်၏ ဒီဂရီ လိုအပ်ချက် နိမ့်သည်။
3၊ သံမဏိပစ္စည်း၊ သံမဏိပစ္စည်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု၊ မာကျောမှုနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
4 ၊ Band အမျိုးအစား ပြုပြင်ထားသော ကလစ်တွင် နှစ်ထပ် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်စွပ်ပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် လက်မောင်းကွင်းအရွယ်အစား၏ ဘောင်အတွင်း ရှိနေသရွေ့၊ ၎င်းသည် ထိရောက်သော ထပ်နေခြင်း၊ ယူနီဖောင်း တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတို့ကို သိရှိနိုင်သည်။ ချောမွေ့သောကွက်များအတွက် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်စွပ် မျက်နှာပြင်သည် ကြမ်းတမ်းပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်သော မျက်နှာပြင် အပေါက်ရှိသော ပိုက်များ၊ ပိုက်ပိတ်ခြင်း စက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံး ပတ်ပတ်လည်တွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။
5၊ ဤထုတ်ကုန်သည်ကတ် buckle အမျိုးအစားချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်၏အကြီးမားဆုံးသင့်လျော်သောအချင်းသည် 30 မီလီမီတာအထိရှိနိုင်ပြီး၊ စာရင်းကိုအလွန်လျှော့ချနိုင်သည်၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်သည် DN1500- ပြုပြင်ခြင်းအကျယ်မှ 2000 မီလီမီတာအထိရှိနိုင်သည်၊ နီးပါးပြည့်မီနိုင်သည်။ ပိုက်အရွယ်အစား။
stainless steel ပြုပြင်ရေး clamp အတွက်
1) ကုပ်ကိုယ်ထည်- stailless သံမဏိ SS 304 ။
2) bolts နှင့် အခွံမာသီးများ : stailless သံမဏိ SS 304 ။
3) ရော်ဘာ : NBR/EPDM ။
4) သော့ခတ်ထားသော အဝတ်လျှော်ဆေးပြား၊ Lugs၊ လက်ခံဘားများ၊ သံချပ်ကာ- stainless steel 304
5) အလုပ်ဖိအား: PN6-PN10
၆)။ထုပ်ပိုးခြင်း : သစ်သားအိတ်များ
1) ကုပ်အစိတ်အပိုင်းများသွန်းလုပ်ခြင်း- ပေါင်းစပ်ထားသော epoxy coating ဖြင့် Ductile သံ GGG500-7
2) မူလီများနှင့် အခွံမာသီးများ : ကာဗွန်သံမဏိ၊ အဆင့် 4.8၊ သွပ်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
3) ရော်ဘာ EDPM ။
4) ကုပ်ကိုယ်ထည်: သံမဏိ SS304 ။
5) အလုပ်ဖိအား: PN16
1) Clamps များသည် လေ၊ ရေနှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများတွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
2) Clamps များသည် SABS 62 သံမဏိပိုက်များ၊ မက်ထရစ်နှင့် အင်ပါယာ PVC ပိုက်များနှင့်သာ သင့်လျော်သော သီးသန့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
၁) Shell-Stainless Steel ၃၁၆
2) Bolts-Steel မှ BS970 အဆင့် 070M20
3) Bolt coating-သွပ်ပြားပြား
4) Rubber Seal-EPDM မှ SABS 974 သို့
အစိတ်အပိုင်း/ပစ္စည်း M1 M2
အရေပြား 304/304L 316/316L
တံတားပြား 304/304L 316/316L
Junction Plate ၊ 304/304L 316/316L
ခြေအိတ်များ 304/304L 316/316L
သော့ခတ်ပန်းကန် 304/304L 316/316L
- AS 4181-2013၊ DIN86128-1/2၊ CB/T4176-2013 ကို ကိုးကားပါ။
မော်ဒယ် ပိုက်အရွယ်အစား အပိုင်းအခြား
သင်ပြုပြင်လိုသော ပိုက် OD နှင့် ယိုစိမ့်သည့်အချက်ကို အတည်ပြုပါ။မှန်ကန်သော ကုပ်အမျိုးအစား (တစ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်၊ အကျယ် သို့မဟုတ် အလျား စသည်) ကို ရွေးချယ်ပါ။ပိုက် OD နှင့် သက်ဆိုင်သော အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်၍ ပြုပြင်ပေးပါမည်။ဥပမာ- ပိုက် OD ≤300mm ဖြစ်သောအခါ၊ သင်ရွေးချယ်သော ကုပ်သည် ယိုစိမ့်နေရာမှ 80mm ပိုကျယ်သင့်သည်။ပိုက် OD≥300mm ရှိသောအခါ၊ ယိုစိမ့်သောအချက်ကို ဖုံးအုပ်ရန်အတွက် အရှည်သည် အနည်းဆုံး 100mm ပိုရိုင်းနေသင့်သည်။
lagrg ပိုက်များတွင် အရေးတကြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ အချို့သော အကွာအဝေး ကုပ်နံပါတ် အချို့ကို တီးဝိုင်းပြုပြင်ရေး ကုပ်နံပါတ် တစ်ခုသို့ စုစည်းပါ။
1. ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ပိုက် OD အတိအကျကို သေချာစစ်ဆေးပါ။
2. သေးငယ်သော အကွာအဝေး နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုကို ရွေးပါ၊ ၎င်းတို့၏ အပိုင်းအခြားသည် သင်ပြုပြင်လိုသော ပိုက် O.Dof နှင့် တူညီကြောင်း သေချာပါစေ။ဥပမာ- DN500mm DI ပိုက် O.D510mm ကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဤ DN500 အတွက် မှန်ကန်သည့်အရွယ်အစားဖြစ်စေရန် အကွာအဝေး 159-170 ရှိသည့် DN150 ကုပ်သုံးခုကို ရွေးချယ်ပါ။
3. အကြီးကြီးတစ်ခုသို့ တပ်ဆင်ရန် သင်အသုံးပြုသော သေးငယ်သော ကုပ်များသည် အရွယ်အစားတူရန် မလိုအပ်သော်လည်း တူညီပါက ပိုကောင်းပါသည်။
1. ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ ကောင်းမွန်စွာဖတ်ပါ။ဖြတ်သန်းစဉ်အတွင်း ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်နှင့် ပန်းခြံများ ပျောက်ဆုံးခြင်း မရှိစေရန် အစိတ်အပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါ။သင့်အပလီကေးရှင်းအတွက် သင့်လျော်သော ကုပ်ပါရှိကြောင်း သေချာစေရန် ပိုက်နှင့် ကုပ်နံပါတ်သတ်မှတ်ချက်များ (တံဆိပ်ပေါ်) ကိုစစ်ဆေးပါ။
2. ပိုက်အစွန်းများပေါ်ရှိ မမှန်မကန်များကို သန့်ရှင်းပြီး ဖယ်ရှားပါ။
3. ပိုက်အဆုံးတစ်ခုစီတွင် အချိတ်အဆက်၏ အကျယ်တစ်ဝက်နှင့်ညီမျှသော အကွာအဝေးတွင် အမှတ်အသားပြုလုပ်ပါ။
4. အချိတ်အဆက်ကို မဖွင့်ဘဲ ပိုက်အစွန်းပေါ်မှ တွယ်ဆက်ကို လျှောချပါ။
5. အခြားပိုက်ကို မျက်နှာမူထားသော အနေအထားသို့ ယူဆောင်လာပါ။ပိုက်များကို ဗဟိုပြု၍ ညှိထားပြီး ပိုက်အဆုံးနှစ်ခုစလုံးသည် ပုံမှန်အတိုင်း ပံ့ပိုးထားကြောင်း သေချာပါစေ။အညွှန်းတွင်ဖော်ပြထားသော သည်းခံမှုများကိုကြည့်ပါ။
6. အမှတ်အသားများကြားတွင် အချိတ်အဆက်ကို ချထားပြီး ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို ကျည်ကာများအောက်တွင် သေချာပါစေ။ထုတ်ကုန်တံဆိပ်တွင်ဖော်ပြထားသော torque လိုအပ်ချက်များထက် မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
7. လိုအပ်သော torque ကို အညီအမျှ အညီအမျှ တင်းကျပ်ပါ။bolts သုံးခုရှိလျှင် ဗဟို bolt ဖြင့် စတင်၍ တင်းကျပ်ပါ။အချိတ်အဆက် သို့မဟုတ် ပိုက်အား သို့မဟုတ် အဆုံးတင်းကြပ်နေချိန်တွင် မလှည့်ပါနှင့်။
ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်း၊ ဓာတ်ငွေ့/သဘာဝဓာတ်ငွေ့/လောင်စာဆီ ပိုက်လိုင်း၊ ထောက်ပံ့ရေး/ရေပိုက်လိုင်း၊ လေကြောင်း/မော်တော်ယာဥ် အထူးပိုက်လိုင်း၊ ချောဆီပိုက်လိုင်း၊ ရွှံ့နွံပိုက်လိုင်း၊ စုပ်ပိုက်လိုင်း၊ ပိုက်လိုင်း၊ ပိုက်လိုင်း၊ ကေဘယ်ကြိုး အကာအကွယ်ပိုက်လိုင်း၊ ပင်လယ်/ရေချိုပိုက်လိုင်း၊ တာဘိုင် ပိုက်လိုင်း၊ လေအေးပေးစက် ပိုက်လိုင်း၊ မီးသတ်ပိုက်လိုင်း၊ လေဝင်လေထွက် ပိုက်လိုင်း၊ ဖိသိပ်ထားသော လေပိုက်လိုင်း စသည်တို့။
Clamps ပြုပြင်ရေး Clamps
Pipe Clamps များ
Folding Type Pipe Repair Clamp RCH For Quick Re...
Single-Section Multi-Function Pipe Coupling MF...
Stainless steel Ductile Iron Band ပိုက်ပြုပြင်ခြင်း C...
ပိုက်ပြုပြင်ရေး Clamp Stainless Steel Multi-Functio...